Etu ị ga-esi amachi ọdịnaya e zigara na Google Chromecast | Gam akporosis
Etu ị ga-esi amachi ọdịnaya e zigara na Google Chromecast
Ọ ghọwo ihe dị mkpa maka ịchọ ijikọ telivishọn na Internetntanetị, ịnweta ọtụtụ ngwa, gụnyere nke a na-ejikarị, ndị nke inwe ike ilele ọdịnaya gụgharia. Google Chromecast ya na ọgbọ nke anọ ya na-ewere nzọụkwụ dị mkpa, karịsịa mgbe gụnyere njikwa ntanetị iji melite ahụmịhe onye ọrụ.
Na Chromecast telivishọn ga-abụ ihe gam akporo TV, na ịnweta ngwa dị iche iche etinyegoro na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọtụtụ n'ime ha dị mkpa maka ndụ anyị kwa ụbọchị. Ọrụ ndị dị ka Netflix, HBO na ndị ọzọ ga-anọ na-enweghị mkpa ka ị rụnye ha ozugbo ịmalitere ngwaọrụ n'ime ime ụlọ gị.
Enwere ike iji Google Chromecast rụọ ọrụ na ekwentị mkpanaka ọbụlagodi na ọ na-abịa yana njikwa dịpụrụ adịpụ, nke mere na onye ọ bụla n'ime ezinụlọ nwere ike ijikwa ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta njikwa zuru oke ọ kacha mma ka amachi ọdịnaya e zigara Chromecast, dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-ekiri usoro ma ọ bụ ihe nkiri.
Ọ bụrụ na ndị ọzọ nwere Google Home ha ga-enwe ike ijikwa Google Chromecast, ihe niile a na mbụ n'okpuru a isi na mkpa nhazi site na mmalite. Mana nke a nwere ike ịbelata n'oge ọ bụla, naanị site na ịnweta ntọala Chromecast ma gbanwee oke.
Kpachi ọdịnaya ezigara na Google Chromecast ị ga-eme ihe ndị a na ngwaọrụ:
Nweta ntọala Google Chrome
Ozugbo n'ime, chọọ nhọrọ «System» wee pịa Zipụ
Họrọ “Ọ dịghị mgbe”, ozigbo onye n’onwe ya gbanwere gburugburu Google Home ga-enwe ike izipu ọdịnaya ma gbanwee ihe ị na-elele n’oge ahụ, tụmadị ka ị ghara ịkpa oke ma ọ bụrụ na ị na-ekiri usoro kachasị amasị gị, ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri
Nhọrọ ọzọ na-atọ ụtọ bụ "Ọ bụ ezie na ezigara ọdịnaya", nke a nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị na-arụ Chromecast ma ị chọghị ka onye ọ bụla chịkwaa ya mgbe ị na-eme ya na ime ma ọ bụ ekwentị
Google Chromecast site na ntọala na-enye gị ohere ịhazi ụfọdụ oke ndị dị mkpa, gụnyere njikwa ndị nne na nna na nhọrọ ndị ọzọ dị n'ime ngwaọrụ ahụ. Chromecast na-ahapụ gị ka ị gbanwee bọtịnụ njikwa ntanetị na Google TV, ị nwere ike ime ya na-eso nkuzi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu ị ga-esi amachi ọdịnaya e zigara na Google Chromecast